orgasm Supersize? (2010) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
orgasm Supersize? (2010)
ဦးနှောက်ရဲ့အလိုဆန္ဒ circuitry ကောင်းတစ်စိတ်ကူး hammering သလဲ?
သင်တတ်နိုင်သမျှသာမကစိတ်အားထက်သန်သော၊ လိုလိုလားလားရှိစေသောဆေးဝါးတစ်ခုသည်အလွန်အမင်းချို့ယွင်းသူများ၏သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ Viagra ကဲ့သို့ပင်အမှတ်အသားမပါသောကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှုရှိလိမ့်မည် ။— Julian Dibbell, The Observer
အဆိုပါ "orgasm ဆေးလုံး" ပြန်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်နှင့်ငါတို့လမ်း chugging ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ပါ 'အမျိုးသမီး Viagra' ကသူမကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ ဦး နှောက်။ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒကိုပြောင်းလဲစေသောအမျိုးသမီးဆေးပညာသည်“ dopamine ထုတ်လုပ်မှုကိုအစပျိုးပေးသည်၊ ၎င်းသည် Viagra ကဲ့သို့ပင်လိင်ဆေးပညာကိုပြောင်းလဲရန်အလားအလာရှိသည်။
Viagra သည် ဦး နှောက်မဟုတ်ဘဲသွေးကြောများ (စိုက်ထုတ်ရန်) ကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်အလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်စတင်မထားဘူး။ ယောက်ျားများစွာတွင်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပုံသဏ္doာန်နည်းတူ၊ စိုက်ထူခြင်း၏ခံစားချက်သည်အလိုရှိသည်။ သို့သော်အခြားသူများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် Viagra ကမဖြတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူများသည်ယခုလက်ရှိတွင်အော်ဂဇင်ပိုမိုလိုချင်သူမည်သူမဆိုအတွက်ပိုကြီးသောတူကိုရှာဖွေလိုကြသည်။ (ဤအုပ်စုတွင်အလွန်အကျွံနှိုးဆွခြင်းခံရသူများနှင့်လည်းပါဝင်သည်ကိုသတိရပါ သူတို့ကိုယ်သူတို့ desensitized အလွန်အကျွံအော်ဂဇင်နှင့်အတူ။ အမျိုးသမီးများကမကြာခဏဆိုသလိုတုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းတို့၏လိင်အင်္ဂါများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောလိင်အင်္ဂါများကိုအသုံးမပြုခြင်းဖြစ်သည် အစီရင်ခံစာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်အကြောင်းကို။ )
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း "စူပါ Size ကိုငါ့ကို“ ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်လူ့အကျိုးအတွက်တိုက်နယ်၏အမြတ်အစွန်းများသောတပ်မက်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်အခါစွဲလမ်းသူနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောသူများ၏စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်းကိုမျှော်လင့်သင့်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုတောင်းသောကာလပတ်လုံးလှုပ်ရှားမှုများဆီသို့ ဦး တည်သောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ဦး တည်နိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အထအသစ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် (အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောပန်းတိုင်များကိုမျက်ခြည်ပြတ်သွားနိုင်သည်။
ယခုအချိန်အထိဤမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော“ အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုဆေးဝါးကုသရန်သင့်လျော်ပါသလော” ဟူသောအယူအဆဆိုင်ရာကျဉ်းမြောင်းသောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်လှည့်စားနေသည်။ ဒါကထိုက်တန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပို၍ ကြီးမားသောအန္တရာယ်များရှိနေသည် - ဤမူးယစ်ဆေးသည်သုံးစွဲသူ၏ဆန္ဒကိုတပ်မက်လိုချင်သောအရာ၊မသက်ဆိုင်ကျား၏။ dopamine ကိုမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤသည်အသံကျယ်သတိပေးခေါင်းလောင်းမြည်သင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့, အမျိုးသမီးများ၏ ဦး နှောက်သည်အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားနိုင်သည်အမျိုးသားများကဲ့သို့ပင်
ပါကင်ဆန်လူနာများနှင့်နာမကျန်းဖြစ်သောခြေထောက်ဒိုင်းနမစ်ဝေဒနာသည်များ၏ ဦး နှောက်၏ကြွက်သားထိန်းချုပ်မှုစင်တာများကိုပစ်မှတ်ထားရန်ပေးသောဒopamineကိုတုပသည့်အခြားဆေးများသည်လူနာအချို့၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်ကိုမမျှော်လင့်ဘဲလုံးဝအံ့အားသင့်သွားစေပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဦး နှောက်ရဲ့စရိုက်နက်ရှိုင်းကနေ limbic စနစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်သည်လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒကိုသာထိန်းချုပ်သည်သာမက ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းစိတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏အူခံစားချက်နှင့်ကောင်းကျိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပျက်သွားရင်ငါတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ရောစပ်တဲ့ dopamine အပိုပါလာရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ် လမ်း ပယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Mayo ဆေးခန်းမှဖော်ပြချက်အရပါကင်ဆန်၏ဆေးဝါးများသည် (dopamine receptors ကိုရေလွှမ်းမိုးစေသော (များသောအားဖြင့် ဦး နှောက်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနေရာများတွင်အာရုံစူးစိုက်ထားသည်)) သည်လူနာများ၏အစာစားချင်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ လိင်, အစားအစာ, အရက်နှင့်လောင်းကစား။ တကယ်တော့, dopamine-မြှမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးတဦးတည်းတကျိပ်ထဲကစကော့တလန်လူနာလေးနက်တီထွင် လောင်းကစားဝိုင်းစှဲ။ ဒါ့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဤအမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောခံခဲ့ရသူတစ်ဦးပြင်သစ်၏အတှေ့အကွုံစဉ်းစားပါ။ တစ်ဦးကတရားရုံးတွင်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတစ်လောင်းကစားသမားများနှင့်သူခိုးသို့သူ့ကိုလှည့်ခဲ့ကြောင်းအာဏာရသူ့ကိုကြီးမားတဲ့အခြေချချီးမြှင့် compulsive လိင်တူဆက်ဆံရမ္မက် (သူ dopamine meds အပေါ်မဖြောင့်ခဲ့သည်) ။ အလားတူစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာလိင်ကွဲလိင်ကွဲဆက်ဆံပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ Parkinson လူနာသည်ကွယ်လွန်သူ၏ဇနီး၏အဝတ်အစားများကိုစတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ The ပျောက်ကွယ်သွားတိုက်တွန်း မိမိအ meds ပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့ကြသည်အခါ။
အသံကချဲ့ကားပြောဆိုနေသလား။ dopamine အလွန်အကျွံသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မအောင်မြင်ခြင်း၊ fetishes၊ schizophrenia နှင့်စွဲခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည်။ Mayo ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ် ဦး က“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကြောပါရဂူတွေကလူနာတွေကိုဆေးကုသမှုခံယူပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့အခါသူတို့တော်တော်များများကသူတို့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးတယ်။ လူနာတစ် ဦး ကဒါကမီးခလုတ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်။ သမ္မတဟောင်းကလင်တန် (သို့) Mark Sanford သည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောခြေထောက်များအတွက်ကုသမှုခံယူခဲ့ပါသလား။
အခုတော့တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးစိတ်ကူး ရည်ရွယ် ဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuitry goose ရန်။ Dopamine မူးယစ်ဆေး dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးလာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, ပျြောမှေ့စနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်မျှော် surges ။
သို့သော်လည်းရေရှည်အတွက်သိပ် dopamine နိုင် dopamine dysregulation နှင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောစိတ်အပြောင်းအလဲများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါအမှန်ပဲ။ dopamine ပိုလျှံမှုကို ဦး တည်နိုင်သည် ရှည်ကြာသော အနိမ့် dopamine။ ဦး နှောက်၏ဆုချီးမြှင့်မှုအစီအစဉ်သည်အသေးစိတ်ညှိပြီးပလတ်စတစ်ဖြစ်သည်။ စွဲစွဲလမ်းမှုသုတေသနပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို dopamine (ကိုကင်းသုံးစွဲသူများနည်းတူ) ဖြင့်ရေလွှမ်းမိုးပါက၎င်းသည်ပိုလျှံမှုများကိုရင်ဆိုင်ရန်သူ့ဟာသူပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
မိုးကြိုးမုန်တိုင်းဝင်ရောက်သည့်အခါသင်ပြတင်းပေါက်များကိုပိတ်နိုင်သကဲ့သို့သင်၏အကျိုးဆက်သည်လှုံ့ဆော်မှုလွန်ကဲပြီးနောက်အဓိကအာရုံကြောဆဲလ်များရှိ dopamine အတွက် receptors များကိုထိန်းချုပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူဆုလိုင်းတိုက်နယ်သည်အခြား“ မုန်တိုင်း” ကိုသွားနေပြီဟုယူဆသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပုံမှန်ပုံမှန်အနေအထားသို့ချက်ချင်းပြန်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ desensitized ဖြစ်လာသည်။ (ပါကင်ဆန်၏ဆေးများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှထိရောက်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ )
ချ - စည်းမျဉ်းများ၏ရလဒ်? သာမန် dopamine ပမာဏသည်မနက်ခင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောယူဆချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကောင်းမြင်စိတ်နှင့်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သောခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ ဤသို့သောနှေးကွေးခြင်းသည်ရက်နာမှုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လည်းဖြစ်သည် ဆုတ်ခွာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ပြန်လည်ချိန်ညှိစဉ်ပုပ်နေခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထပ်မံ၍ dopamine ကိုပုံမှန်တုံ့ပြန်နိုင်သည်။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်“ မှန်ကန်စွာခံစားရ” ရန်အလွန်အပူတပြင်းဖြစ်လာပြီးမူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်၊ စိတ်မရှည်သောအသုံးစရိတ်၊ အစာမစားနိုင်သောအစားအစာ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၊ လောင်းကစားခြင်း၊ လိင်, နှင့်ဒါ။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်လှုံ့ဆော်မှုများကလျှော့ချရေးကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ပိုမိုပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းအားကိုဖြစ်စေသည်။ တိုတိုပြောရရင် dopamine highs လိုပဲ dopamine lows ဟာ compulsive behavior ကိုမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်“ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည်ပြင်းထန်သည် High-အန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ အရက်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ” အချို့ကစိတ်ကျဝေဒနာသည်ကုသခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုယူဆကြသော်လည်းအလွန်အကျွံနှိုးဆွမှုသည်စိတ်ကျရောဂါ (နာတာရှည်အနိမ့် dopamine) ကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့နောက် dopamine surges ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးဖြင့်အန္တရာယ်ပြုရန်ကြိုးစားသည်။
၎င်းအန္တရာယ်အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများအတွက်အော်ဂဇင်ကိုနှစ်သက်သူများ၏စွဲလမ်းမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည် သူတို့က ဦး နှောက်၏ဆုလဒ်ပုံသဏ္manipာန်ကိုကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်သော“ ဆေးစွဲ” သည့်ဆေးဝါးများကိုစမ်းသပ်နေပြီးဖြစ်သည်။ပိတ်ဆို့ခြင်း dopamine ၏ဆိုးကျိုးများ။ စမ်းသပ်မှုအချို့လူနာစေပြီ ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခဲ့သည်။ အလွယ်တကူသင်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုအော်စာမရိုက်လျှင်သင်ဘာလုပ်မည်နည်း လည်း တစ်ခုစွဲရှိတယ် ??
လိင်စိတ်တွန်းအားပေးရန် dopamine ကိုအသည်းအသန်လုပ်ခြင်းသည်မလိုလားအပ်သောအကျိုးဆက်များကိုအလျင်အမြန်ဖန်တီးနိုင်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာလူနာများအနေဖြင့်ရလဒ်များထွက်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့်သူတို့၏လက္ခဏာများကိုသတ်မှတ်ထားသော orgasm ဆေးနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိနိုင်ပါ အပြင်မှာ အိပ်ခန်း။ ဥပမာအားဖြင့်, ရောဂါလိင်စွဲ Co-ရောဂါ၏မြင့်မားဖြစ်ပွားမှုသတင်းပို့ကြောင်း, ထိုကဲ့သို့သောအရက်, လောင်းကစားသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်နောက်ထပ်တ္ထုများသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများမှစွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များလည်းလိင်ရှိသည်သောကြွက်သိသိသာသာပိုပြီးဖြစ်ကြောင်းပြသကြ ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမှဖြစ်ပေါ်နိုင် ကညာကြွက်ထက်။ တတိယအချက် လိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက် ပိုပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲဖို့လေ့ရှိပါတယ်။
နှင့်အတူအမေရိက၏အတွေ့အကြုံ စီးကရက် နှင့် အမြန်ပြင်အစားအစာ လူသားမြားသညျလိုကျနာသောလူ့အဖွဲ့အစည်းအယှက်များနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုအသိအမှတျပွုမှာဦးနှောက်၏အကျိုးကို circuitry excites အဘယ်အရာကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်အမြတ်ထုတ်မှာအလွန်ကောင်း, အလွန်ဆိုးရွားဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အစာရှောင်ခြင်းအစာအာဟာရ၏ status များနှင့်အမြတ်အစွန်းမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျှော့ချအလွန်မှန်ကန်ပြဿနာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Dopamine dysregulation တဦးတည်းပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ Artficially ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ hammering အမှန်တကယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၎င်း၏အပြည့်အဝအလားအလာကိုအသာပုတ်ဖို့သင်ယူခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုတားဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ထင်ရစေခြင်းငှါအဖြစ်ထူးဆန်းတဲ့ပိုပြီးအော်ဂဇင်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအရှိန်မြှင့်သေချာပေါက်အချစ်သီချင်းတိုးတက်စေမည်မဟုတ်။ ဒါဟာတကယ်တော့ထဲမှာ, အရှိန်မြှင့်စေခြင်းငှါ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု (အိမ်ထောင်ဖက်အကြားလေ့) ။
လိင်ဆန္ဒနှင့်စွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေသော ဦး နှောက်ပတ်လမ်းကိုအားဖြည့်စေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမစားသုံးမီနောက်ထပ်မေးခွန်းများမေးကြစို့။